एनआरएनएमा डिजिटल परिचयपत्र वितरण सुरु – News Portal of Global Nepali
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउन स्मार्ट एनआरएनए प्रोजेक्टको घोषणा गरेको दुई महिना नहुदैं डिजिटल परिचयपत्र वितरण सुरु भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट सो परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघले चरणबद्ध रुपमा अन्य देशमा पनि परिचयपत्र योजनाबद्ध तरिकाले वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । नयाँ प्रविधिको डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्न सबै पन्जिकृत सदस्यहरुको विवरण गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय प्रणाली (एमआईएस) मा नाम दर्ता गरेको हुनुपर्छ ।
टेण्डरमार्फत नेपालको एक कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिइएको संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले जनाए । उक्त कम्पनीले सचिव गौरी जोशीको नेतृत्वमा रहेको स्मार्ट एनआरएनए कमिटीसँग संयोजन गरेर काम गर्नेछ । संघ नयाँ ईरामा प्रवेश गरेको छ भने संघलाई समयसापेक्ष विकास गर्न यो प्रोजेक्ट कोषे ढुङ्गा हुने संघले जनाएको छ ।
हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वेभसाइटको व्यवस्था गरिनेछ । वेभसाईटमा एकरुपता ल्याइनेछ भने आईसीसीको वेभसाइटलाई आधुनिकरण गरिनेछ । संघका दस्तावेज, बैंठक, सम्मेलन, प्रोजेक्ट आदिको डिजिटल लाइब्ररी तयार गरिने संयोजक जोशीले बताए ।
११५१३	पटक पढिएको